Saxiixii ugu horreeyey oo uu Manchester United la doonayey macallin Jose Mourinho kaddib imaatinkiisii Old Trafford oo daaha laga qaaday – Gool FM
Haaruun September 8, 2019
(Manchester) 08 Sebt 2019. Sida wararku ay sheegayaan macallin Jose Mourinho ayaa doonayey inuu Raphael Varane ka dhigto saxiixii ugu horreeyey ee kooxda Manchester United markii uu yimid garoonka Old Trafford.
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa la soo warinayaa inuu isku dayey saxiixa daafaca dhexe ee Real Madrid, Raphael Varane si uu u noqdo saxiixiisii ugu horreeyey ee kooxda Manchester United xagaagii 2016-kii.
Varane ayaa ka hoos ciyaaray Mourinho bilowgii waayihiisii ciyaareed ee Los Blancos, xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa tan iyo markaas ku dhawaad 300 oo kulan u saftay kooxdiisa reer Spain tartammada oo dhan.
Jariiradda AS ee dalka Spain ayaa daaha ka qaaday in markii uu yimid garoonka Old Trafford sanadkii 2016-kii, Mourinho uu durbadiiba indhaha ku hayey inuu heshiis la gaaro 26-sano jirkaan, kaasoo loo arkayey ciyaaryahan awood u leh inuu wax ka bedelo difaacooda.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Zinedine Zidane uu ka dhaadhiciyay Varane inuu iska fogeeyo xiisaha Premier League, isla markaana uu kusii nagaado caasimadda Spain.
Man United ayaana bedelkiisa u dhaqaaqday Eric Bailly gacantana ku soo dhigay intii lagu guda jiray suuqaas kala iibsiga, ciyaaryahanka reer Ivory Coast ayaa inta badan ku dhibtooday inuu bandhig cajiib ah ka sameeyo garoonka Old Trafford sababo la xiriira dhaawacyo dhowr ah oo isku xigay.
Kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ayaa jabisay rikoorkeeda suuqa kala iibsiga ee daafaca dhexe, iyadoo bixisay 80 milyan gini oo ay Leicester City kaga soo iibsadeen Harry Maguire bishii la soo dhaafay.
Kooxda Real Madrid oo weli xiiso u qabta xiddig ka tirsan Ajax oo ay u aragto bedelka Paul Pogba